M/weyne ku xigeenka Puntland oo baaq nabadeed u diray shacabka reer Puntland. – Radio Daljir
M/weyne ku xigeenka Puntland oo baaq nabadeed u diray shacabka reer Puntland.
Garoowe, July, 10 – C/samad Cali Shire M/weyne ku xigeenka dawladda Puntland ayaa baaq nabadeed u diray dadweynaha reer Puntland, kaas oo daba socda falal ammaanka ka dhan ah oo ka dhacay qaar ka mid magaalooyinka Puntland.
Waxaa uu sheegay inay tahay in shacabku ay dawladda kale shaqeeyaan xaqiijinta ammaanka oo ah tiirka nolosha ee bulshada, si taas loo helana ay waajib tahay in la muujiyo isku duubni ka dhan amni xumada oo dhexmarta shacabka iyo dawladda.
M/weyne ku xigeenka ayaa sheegay hadalkan ka sheegay shir jaraa?id oo maanta ku qabtay xarunta madaxtooyada ee magaalada Garoowe, halkaas oo uu maanta gaaray si weyn-nna loogu soo dhaweyey. Waxaa kale oo uu ka waramay safar uu dhawaan ku tagay dalka dibadiisa oo uu sheegay inuu guul ku dhammaaday.
Generalka oo dhawaanahan ku sugnaa magaalada Bossaso ayaa saaka u ambabaxay safarkiisa Garoowe waxaana uu ku sii hakaday magaalada Qardho, oo uu kula kulmay guddiga nabadgalyada ee gobolka Kar-kaar uuna kale hadlay sidii ammaanka loo adkayn lahaa.